ဘူတန်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 27°25′01″N 90°26′06″E﻿ / ﻿27.417°N 90.435°E﻿ / 27.417; 90.435
ဘူတန်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဘူတန်ဘုရင့်နိုင်ငံ (Kingdom of Bhutan) ဖြစ်သည်။ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်း၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသော တောင်အာရှ ဒေသ ရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ ငယ်လေး တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်၊ အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တို့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ အနောက်ဘက်ရှိ နီပေါနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင် ဆစ်ကင်းပြည်နယ်ကခြားထားသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်မူ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်က ခြားထားသည်။
Brug Gyal-khab (Wylie)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Druk tsendhen (Dzongkha)
ပြည်ထောင်စု ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စံနစ်
• ဒရက် ဂါပို
ဂျစ်မီ ခီဆာ နမ်ဂျယ် ဝမ်ချပ်
၁၉၀၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်
• အင်ဒို-ဘူတန် သဘောတူစာချုပ်
၁၉၄၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၈ ရက်
• ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ
၁၉၇၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်
၃၈,၃၉၄ km2 (၁၄,၈၂၄ sq mi) (အဆင့်: ၁၃၃)
• ၂၀၁၆ ခန့်မှန်း
၇၉၇,၇၆၅ (အဆင့် - ၁၆၅)
၁၉.၃/km2 (၅၀.၀/sq mi) (အဆင့် - ၁၆၂)
$၉,၄၂၆ (အဆင့် - ၁၁၅)
$၃,၁၁၇ (အဆင့် - ၁၃၀)
အလယ် · ၁၂၉
The population of Bhutan had been estimated based on the reported figure of about 1 million in the 1970s when the country had joined the United Nations and precise statistics were lacking. Thus, using the annual increase rate of 2–3%, the most population estimates were around2million in 2000. A national census was carried out in 2005 and it turned out that the population was 672,425. Consequently, United Nations Population Division reduced its estimation of the country's population in the 2006 revision for the whole period from 1950 to 2000.
၁၇ရာစုနှစ်အစောပိုင်းကာလအထိ စစ်ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့နောက် တိဘက်လားမားနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင် Shabdrung Ngawang Namgyal က တိုင်းပြည်ကို စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သည်။ တိဘက်တွင် ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှု ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီး ဘူတန်လူမျိုးအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀ရာစုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဘူတန်သည် ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွင်းသို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးရလာသောအခါ အိန္ဒိယပြည်၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက် ကျရောက်ခဲ့ပြန်သည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် Business Week မဂ္ဂဇင်းမှ လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ချက်များအရ ဘူတန်နိုင်ငံအား အာရှနိုင်ငံများထဲတွင် အပျော်ရွှင်ဆုံးတိုင်းပြည်၊ ကမ္ဘာ့အဋ္ဌမမြောက် အပျော်ရွှင်ဆုံးတိုင်းပြည်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ 
ဘူတန်နိုင်ငံ၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မှာ တောင်ပိုင်းတွင် သမပိုင်း (subtropics) လွင်ပြင် ဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်းတွင် မီတာ (၇၀၀၀)ကျော်မြင့်သော ထင်းရှူးတော (Sub-alpine) ဟိမဝန္တာကုန်းမြင့်ပိုင်းဒေသ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို ဝဇီရာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ (Vajrayana Buddhism) အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ လူဦးရေ ၆၉၁,၁၄၁ ဦးရှိပြီး အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အနည်းငယ်ရှိပြီး မြို့တော်မှာ သင်ဖူ (Thimphu) ဖြစ်သည်။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဘုရင်စနစ်ဖြင့်အုပ်စိုးလာခဲ့သော ဘူတန်နိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ခုနှစ် မတ်လတွင် ပထမဦးဆုံးသော ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ တောင်အာရှနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်း (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ (၁၆)ကြိမ်မြောက် SAARC ကွန်ဖရင့်ကို ၂၀၁၀၊ ဧပြီလတွင် ဘူတန်နိုင်ငံ၌ လက်ခံကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၃၈၈၁၆ (စတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၁၄၉၈၇) ရှိသည်။ 
ဟိဝမန္တာ တောင်တန်း၏ အရှေ့တောင် တောင်စောင်းတွင်တွင် တည်ရှိသော ဘူတန်နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံကလေး တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက် တွင် တိဗက်ပြည်ရှိ၍ အရှေ့အနောက်နှင့် တောင်ဘက်တို့တွင် အာသံ၊ ဆစ်ကင်နှင့် ဘင်္ဂလားပြည်နယ်များ အသီးအသီးတည်ရှိ သည်။ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၆ ဒီဂရီ နှင့် ၂၈ ဒီဂရီ ကြားနှင့် အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၈၉ ဒီဂရီ နှင့် ၉၂ ဒီဂရီ ကြားတွင် တည်ရှိလေသည်။
ဘူတန်နိုင်ငံ၏ အကျယ်အဝန်းသည် စတုရန်းမိုင် ၁၈ဝဝဝ ကျော်ကျော်ခန့်ရှိ၍ တနင်္သာရီတိုင်း၏ ထက်ဝက်ခန့် ရှိပြီးလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်သာသာ ကျယ်ဝန်းသည်။ အရှေ့မှ အနောက်သို့မိုင် ၁၉ဝ ရှည်၍ တောင်နှင့် မြောက်မိုင် ၉ဝ ကျယ်သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေအရ ဘူတန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေသည် ၃ဝဝဝဝဝ ခန့်ရှိသည်။ ဘူတန်နိုင်ငံသည် အများအားဖြင့် တောင်ထူထပ်သော ဒေသဖြစ်သည်။ ဗြဟ္မပုတ္တရမြစ်၏ မြစ်လက်တက်များ ဖြစ်သော မားနတ်စသည့် မြစ်ကလေးများသည် ဘူတန်နိုင်ငံကို တောင်မှ မြောက်သို့ဖြတ် ၍ စီးဆင်းလေသည်။
ဘူတန်နိုင်ငံသည် ကျဉ်းသော်လည်း ဘူတန်နိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုသည် တစ်နေရာနှင် တစ်နေရာ မတူပေ။ တစ်နေရာ နှင့် တစ်နေရာ ခရီးမကွာလှမ်းသော်လည်း တည်ရာဒေသအနိမ့် အမြင့် ကွာလှသဖြင့် ဘူတန်နိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုသည် ထိုသို့ တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာ မတူခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးရေချိန်သည် တစ်နှစ်လျှင် လက်မ ၂ဝဝ မှ ၃ဝဝ အထိရွာသည်။ တောင် များသည် သစ်တောများဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၍၊ အနိမ့် ပိုင်းများတွင် ပိုင်းထင်းရှူးပင်၊ ဝက်သစ်ချပင်၊ သင်းဝင်ပင် စသည့် အပင်များ ပေါက်ပြီးလျှင် အမြင့်ပိုင်းတွင် ကွန်နီဖာ ထင်းရှူးပင်များပေါက် သည်။ ဘူတန်နိုင်ငံတွင် မြေပြန့်ဒေသ ဟူ၍ အလွန်နည်းသဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အနည်းငယ် သာ လုပ်ကိုင် နိုင်ကြသည်။ တောင်ခါးပန်းများတွင် လှေကား ထစ်ကွင်းများ ပြုလုပ်၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးနိုင်က အကျိုးရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း အကုန်အကျခံ၍ မပြုပြင်နိုင်ကြသဖြင့် ကြီးပွား တိုးတက်မှု မရှိချေ။ အဓိက စိုက်ပျိုးကြသော ကောက်ပဲသီးနှံ များမှာ စပါး၊ ဂျုံ၊ ပြောင်းဖူ၊ နှံစားပြောင်း၊ ရှရီမန်ဂျုံတို့ဖြစ် သည်။
ဘူတန်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတို့သည် အများအားဖြင့် ဘူတီးယား လူမျိုးများဖြစ်၍ တောင်ပိုင်းတွင် နီပေါ လူမျိုး အနည်းငယ် နေထိုင်သည်။ ဘူတီးယား လူမျိုးများသည် အပင်ပန်းခံနိုင်၍ လုံ့လဝီရိယ ရှိကြသည်။ လယ်ယာစိုက် ပျိုးရေး အပြင်၊ နွားမြင်းမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်သည်။ ကိုးကွယ်သော အယူဝါဒမှာ လာမာ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၂ဝဝ ကျော်က ဘူတန်နိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သော တေးဖပ်လူမျိုးတို့ကို တိဗက် လူမျိုးတစ်စုက တိုက်ခိုက်ကာ ဘူတန်နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက် ထားခဲ့ကြသည်။ ဘူတန်နိုင်ငံသည် ထိုအခါက များစွာ ကျယ်ဝန်းပြီးလျှင် ယခုဒါဂျီလင်မြို့တည်ရာ ဒေသတစ်ဝိုက်နှင့် တောင်ဘက်ရှိ လွင်ပြင်များ၊ အိန္ဒိယသွား တောင်ကြားလမ်းများ ကိုပင် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ၁၇၇၂ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ဘူတန်နယ်စပ်အထိ နယ်ချဲ့လာသည်။ ထိုအခါ ဘူတန်နိုင်ငံပိုင် ဒါဂျီလင်မြို့ဒေသတစ်လွှားနှင့် တောင်ကြား လမ်းများကို အလိုရှိသောကြောင့် ဗြိတိသျှ တို့သည် ဘူတန်ဘုရင်များနှင့် ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံရန် ကြိုးစားသည်။ သို့ရာတွင် ဘူတန်နိုင်ငံ က ဆက်ဆံရန် ငြင်းဆိုသောကြောင့် ၁၈၃၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့က အလိုရှိသော လွင်ပြင်များနှင့် တောင်ကြားလမ်း များကို အဓမ္မသိမ်းယူရာမှအစ ဘူတန်နှင့် ဗြိတိသျှတို့စစ်ဖြစ် သည်။ ၁၈၆၅ ခုနှစ်တွင် စစ်ပြေငြိမ်းသောအခါ ဘူတန်နိုင်ငံ က ဒါဂျီလင်နှင့် တောင်ကြားလမ်းများကို လက်လွတ်ရ၍ ဗြိတိသျှအစိုးရက ဘူတန်နိုင်ငံအား ထောက်ပံ့ကြေး အဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် အိန္ဒိယငွေ ၅ဝဝဝဝ ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၁ဝ ခုနှစ် တွင် ဘူတန်နိုင်ငံ၏ ပြည်ပရေးရာများကို ဗြိတိသျှအစိုးရအား လက်ဝါးကြီးအုပ်ခွင့် ပေးလိုက်ရပြန်သည်။ ပြည်တွင်းရေးရာ များကိုကား ဗြိတိသျှတို့လုံးဝမစွက်ဘက်ချေ။ နှစ်စဉ်ငွေ ထောက်ပံ့ကြေးကိုလည်း အိန္ဒိယငွေ ၁ဝဝဝဝဝ အထိ တိုးမြှင့် လိုက်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းကမူ ထောက်ပံ့ကြေး အဖြစ် အိန္ဒိယငွေ ၂ဝဝဝဝဝ ပေးသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင်မူ ထောက်ပံ့ကြေး အိန္ဒိယ ငွေ ၅ဝဝဝဝဝ ပေးရန် သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ယင်းစာချုပ်အရ ၁၈၆၅ ခုနှစ်က ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ထားသော ၃၂ စတုရန်းမိုင်ရှိ ဒေဝန်ဂီနီနယ်ကို ဘူတန်နိုင်ငံအား ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံခြား ရေး၌မူ အိန္ဒိယဩဇာခံပင် ဖြစ်သည်။
ဘူတန်နိုင်ငံသည် တိဗက်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား တွင် တည်ရှိ၍ ထိုနိုင်ငံများမှ ယဉ်ကျေးမှုကိုရသည်။ ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးတွင် တိဗက်စံနစ်လည်း ဆန်သည်။ အိန္ဒိယရှေးခေတ် အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ်လည်း ပါဝင်သည်။ တိဗက် နိုင်ငံ၌ကဲ့သို့ဂိုဏ်းအုပ်လာမာဘုန်းတော်ကြီးက အုပ်ချုပ်သည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးအား ဓမ္မရာဇာဟု ခေါ်သည်။ ဓမ္မရာဇာပျံလွန် လျှင် တိဗက်နည်းအတိုင်း ရဟန်း၏ လူဝင်စားကိုရှာဖွေ၍ နောက်ထပ် ဓမ္မရာဇာ တင်မြှောက်သော ဒှိူရာဇာခေါ် မင်းက သာ နိုင်ငံကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် အုပ်ချုပ်သည်။ ၁၆ ရာစု နှစ် အလယ်မှ စ၍ ယင်းစနစ်အတိုင်း သာသနာပိုင်နှင့် ဘုရင် ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ရာ ၁၉ဝ၇ ခုနှစ်အထိ ဖြစ်သည်။ ၁၉ဝ၇ ခုနှစ် တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ဆန္ဒအတိုင်း တောင်ဆာနယ်စားဆာအပ် ယင်းဝန်ချုပ်အား အဟာရာဇာအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ၍ ဘုရင်တစ်ဦးတည်း အုပ်ချုပ်သောစံနစ် တီထွင်လိုက်သည်။ ထိုမဟာရာဇာ၏ သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် ဘူတန်နိုင်ငံကို ယခုတိုင် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်လျက် ရှိသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မဟာရာဇာကြီး၏ မြေး ယခုလက်ရှိ မဟာရာဇာ ဂျစ်ဂမီ ဒေါ်ဂျီဝန်ချုပ်အရိုက်အရာခံ ယူသည်။
ဘူတန်နိုင်ငံ၏ နွေရာသီမြို့တော်သည် တာရှိချောဇွန်း မြို့ဖြစ်၍ ဆောင်းရာသီမြို့တော်သည် ပွန်နက်ခါးမြို့ဖြစ်သည်။
↑ 9th Five Year Plan (2002–2007)။ Royal Government of Bhutan (2002)။ 20 March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ National Portal of Bhutan။ Department of Information Technology, Bhutan။ 23 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Population Prospects: The 2017 Revision။ United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division။
↑ Bhutan။ Citypopulation.de။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ Butan။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ United Nations Development Programme။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ 16 December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Treaty Bodies Database – Document – Summary Record – Bhutan။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCHR) (5 June 2001)။
↑ World Population Prospects။ ကုလသမဂ္ဂ (2008)။7January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World's Happiest Countries။ Images.businessweek.com။ 26 April 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-04-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bhutan Portal။ 23 April 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-05-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘူတန်နိုင်ငံ&oldid=725868" မှ ရယူရန်
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။